Hub laga boobay xaruntii tababarka ciidamada oo ay Imaaraatku maamulayeen… – Hagaag.com
Hub laga boobay xaruntii tababarka ciidamada oo ay Imaaraatku maamulayeen…
Ugu yaraan 600 qori ayaa lagu soo waramayaa in laga boobay xaruntii tababarka ciidammada ee ay Imaaraatka maamulayeen ee magaalada Muqdisho maalmo uun kadib markii tababarayaashii Imaaraatka ay ka baxeen dalka, sidoo kalena la laalay heshiiskii labada dowladood ka dhaxeeyay.
Waxaa qoryahan ku xardhan astaanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, balse hubka waxaa dalka keenay Imaaraatka sida ay sheegeen illo wareedyo u waramay wakaaladda.
Maalintii isniintii lasoo dhaafay ayuu iska hor imaad ka dhacay xaruntaas, dad goobjoogayaal ahna waxa ay sheegeen in ay arkayeen askartii tababarka ku jirtay oo dareeska iska siibaya, kadibna qoryaha lasii baxsanaya iyaga oo isticmaalaya bajaaj.
Ciidanka ilaalada madaxtooyada ayaa la sheegay in ay markii dambe la wareegeen xarunta.
Imaaraatka ayaa rartay qalab badan oo ka yiilay Muqdisho, waxayna joojiyeen barnaamijkii tababarka ciidanka kadib markii dowladda Federaalka ay garoonka Muqdisho ku qabatay diyaarad siday lacag malaayiin doolar ah oo ay Imaaraatka sheegeen in loo waday ciidanka tabobarka ku jiray.